काठमाडाैं, १ चैत । न्यायपरिषद सचिव नृपध्वज निरौलासँगको कुराकानीः प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गरिएको पत्र किन पठाएको ? कानुनअनुसार प्रधानन्यायाधीशको पदावदी ६५ बर्षसम्म मात्रै हो । ६५ बर्ष पुगेपछि एक दिन पनि बढी पदमा बस्न मिल्दैन । त्यसअनुसार उहाँ गत साउन २१ गते नै ६५ बर्ष पुगिसक्नुभएकाले त्यसै दिनबाट प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पनि पाइसक्नुभएको रहेछ । त्यो आजै आएर...
काठमाडौंमा ५० वर्ष पहिले फोहर विक्रि हुन्थ्यो, आज प्रदूषणको चपेटामा छौँ
काठमाडौं, १२ फागुन । प्रदुषण नियन्त्रणमा राज्य उदासीन बन्दै गएको छ । हामी प्रदूषणको मार खेपिरहेका छौँ । अब मुलुक औपचारिक रुपमै संघीय संरचनामा गएको छ । सात प्रदेशका सातवटै राजधानी हुन्छन् । ती राजधानी मूल शहर ठहरिनेछन् । त्यतिमात्रै होइन अहिले महानगर, उपमहानगर र नगरहरु पनि थुप्रै छन् । शहरीकरण बढ्दो छ । तर, हामीले संघीयतामा जाँदा राजनीतिक र प्रशासनिक...
माओवादी नेता किराँती भन्छन : जुम्रे, जुके र लिखे अवसरवादीको झुण्ड रहेको माओवादी केन्द्र ‘प्रचण्ड प्राइभेट लिमिटेड’
माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य गोपाल किराँतीले एमाले र माओवादीको पार्टी एकताका लागि कुनै आधार तयार नभएको बताएका छन् । नेता किराँतीले एमालेले माओवादको सिद्धान्त र पहिचानको मुद्दा स्वीकारे मात्रै आफुहरु पार्टी एकतामा सहभागि हुने बताए । किराँतीले आफुहरुले उठाएका वैचारिक र सैद्धान्तिक मुद्दालाई अघि सारेर अघि नबढे छुट्टै पार्टी गठन गरेर अघि बढ्ने चेतावनी समेत दिएका...
'राष्ट्रपतिमाथि पनि नैतिकताको प्रश्न उठ्छ'
पूर्व प्रधानन्यायाधीश एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा स्वच्छ छवि र प्रष्ट वक्ताका रूपमा चिनिन्छन् । निष्ठामा रहेर झन्डै ३० वर्ष कानुन व्यवसायको अनुभवस सँगालेका शर्मासँग न्यायपालिकाको पछिल्लो घटनाक्रमलगायत समसामयिक विषयमा...
काठमाडाैं, १ चैत । न्यायपरिषद सचिव नृपध्वज निरौलासँगको कुराकानीः प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गरिएको पत्र किन पठाएको ? कानुनअनुसार प्रधानन्यायाधीशको पदावदी ६५ बर्षसम्म मात्रै हो । ६५ बर्ष पुगेपछि एक दिन पनि बढी पदमा बस्न मिल्दैन । त्यसअनुसार उहाँ गत साउन...
काठमाडौं, १२ फागुन । प्रदुषण नियन्त्रणमा राज्य उदासीन बन्दै गएको छ । हामी प्रदूषणको मार खेपिरहेका छौँ । अब मुलुक औपचारिक रुपमै संघीय संरचनामा गएको छ । सात प्रदेशका सातवटै राजधानी हुन्छन् । ती राजधानी मूल शहर ठहरिनेछन् । त्यतिमात्रै होइन...
उत्तर र दक्षिणको कठपुतली बन्दा देश द्वन्द्वमा जान्छ : डा.बाबुराम भट्टराई
निरपेक्ष भाव देखिन्थ्यो डा बाबुराम भट्टराईको अनुहारमा । भर्खरैको चुनावमा उनले जितेका थिए, उनको पार्टीले हारेको थियो । २०७२ असोजमा संविधान जारी भएलगत्तै माओवादी पार्टी त्यागेर वैकल्पिक ‘नयाँ शक्ति पार्टी’ बनाइछोड्ने उनको आह्वानलाई मतदाताले...
गलत समयमा स्वराजको भ्रमण : तर जमाना उल्टिगयो, दिल्ली नेपाल धाउन थाल्यो
भारतीय परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजले विहिबारबाट नेपालको २ दिने भ्रमण गर्दै छिन् । ‘प्रधानमन्त्री चयन भइसकेपछि स्वराजको नेपाल भ्रमण भए सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छैन, यद्यपि अहिले सरकार बन्ने प्रकृयामा रहेको...
प्रदेशस्तरमा सेवा थप्न प्रयासरत छौ : प्रबन्ध निर्देशक डा.रानामगर, बीपी स्मृति अस्पताल
बीपी स्मृति अस्पतालले सेवा दिनथालेको १० बर्ष बितेछ । सहकारीको अवधारणाबाट सञ्चालनमा आएको यस अस्पतालले सरल र सुुलभ सेवासँगै सर्वसाधारणको स्वास्थ्य उपचारका क्षेत्रमा भरपर्दो र विश्वासनीय बन्दे जानु यसको सकारात्मक पक्ष हुन । बिपी स्मृति सामुदायिक...
आलोचना गर्नेलाई धन्यवाद, कसैलाई अन्याय भयो भने म छोड्दिन्छु : कोमल वली
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा यतिबेला कसैको चर्चा छ भने कोमल वलीको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनबाट सबैभन्दा बढी मत ल्याएर केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएको वर्ष दिन नवित्दै एमालेले राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार बनाएपछि उनको चर्चा चलेको हो...
२ नम्बरको प्रदेश सरकारमा कांग्रेससँग सहकार्य हुन्छ : महासचिव सुमन
राजपा महासचिव मनिष सुमनले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा कांग्रेससँग तालमेल गरेको मधेशी गठबन्धनले प्रदेश सरकार निर्माणमा पनि सहकार्य हुनसक्ने बताए । संविधान संशोधनमा अनुदार बनेको एमालेसँग सहकार्य कठिन हुने नेता सुमनले बताए । राष्ट्रियसभा निर्वाचन र २...
काठमाडाैं, २६ पुस । अदालतको अवहेलना अभियोग लगाइएका प्राडा गोविन्द केसीसँग मंगलबार बयान लिइएको छ। सर्वोच्च अदालतमा बयान सकिएपछि उनलाई बुधबार फेरि हाजिर गराउने गरी न्यायिक हिरासतमा पठाइएको छ। केसीलाई मंगलबार बिहान नौ बजे नै सर्वोच्चमा उपस्थित गराइए पनि साढे १...
माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य गोपाल किराँतीले एमाले र माओवादीको पार्टी एकताका लागि कुनै आधार तयार नभएको बताएका छन् । नेता किराँतीले एमालेले माओवादको सिद्धान्त र पहिचानको मुद्दा स्वीकारे मात्रै आफुहरु पार्टी एकतामा सहभागि हुने बताए । किराँतीले आफुहरुले...